Waist Band - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Waist Band)
I-Eva Yokubopha Ngezifiso
Akunandaba ukuthi ama-skis akho abanzi kangakanani, uzokwazi ukuthola iSki Strap ezobagcina ekuthini bangakwazi ukuhlangana lapho ubopha umgibeli noma uzama nje ukuwela umgwaqo ngemuva kokuqhamuka kokuhamba kokusa kokusa. Imichilo yethu yokweqa e-ski ezweni lethu yenziwa ngenayoni enzima, eqinile ne-foam. Igwegwe...
I-Cross Country Ski Strap yethu isetshenziswa njenge-buffer. Izinto ezivikelayo phakathi kwe-skis ziyazivikela ekugabaneni zibhekane ngenkathi kugibele izintaba. Ingasetshenziswa kuma-skis asezintabeni zonke kufaka nezingane i-skis. Le ntambo yokubamba i-ski yenzelwe ukuvikela i-ski yakho futhi yenza kube lula...
Ikhebula ngentambo yensimbi yokulinganisa nentambo
Ukupakisha: I-100pcs / imigqa, i-1000pcs / i-polybag
Le ntambo ye-loop yokugoba ngebhande iqukethe indwangu yokunamathela kanye ne-ejection hook. Kusetshenziselwa ukubopha izintambo noma ezinye izinto. Hlanganisa izinto ndawonye. Indwangu yokunamathela ethambile ingavikela izinto ezibophayo kahle. Imibala nosayizi kungenziwa ngezifiso. Izinhlaka zomkhiqizo Matraial...
Izintambo Ze-Nordic Ski Ngephrinta Yokushicilela
Imigwaqo ye-Cross Country Ski yenziwa nge-nylon hook kanye ne-loop ne-foam board. Lo mbhangqwana onamandla weNylon Ski Straps ngeke ukudumise. Ungagcina i-skis ngokuhlangana ukuze ugoqe uzungeze bese ulungisa izingwegwe ukuze uvule ukuze ugcine i-skis ndawonye. Lokhu okuqukethwe kuyasebenza futhi, kuthambile, futhi...
Umbala We-Colour Colour Hook And Loop Cable
Ukupakisha: I-50pcs / isishuqulu, i-1000pcs / ibhokisi, okufakwa ngalo njengokwesicelo sakho
Isitifiketi: Reach, ROHS, SGS, ISO9001, BSCI
I-Hook Loop Strap With Buckle isebenzisa okungapheli okubalwa kukho: ukuthola imishini yangaphandle, ukugoqa izingubo emithwalweni, ukuhamba, ukubamba izitshalo emakhejini ezingadini zemifino, ukuthola amathayi ebhayisekili ngesikhathi sokuhamba, futhi kuphela ngomcabango wakho. Lolu hlobo lokugoqa ikhebula kanye...
Amabhagi Okuthengisa Okushisayo Ne-Loop Strap
I-Hook ne-Loop Strap Nge-Buckle ingashesha futhi kalula ukulungisa cishe noma yini yesayizi efanele. Le Hook And Loop Cable Strap isetshenziswa kuyo yonke into kusuka ezingutsheni kuya kwangaphandle, kufaka izintambo, okhalweni, izambulela, ezemidlalo nezinxhaxana, izincwadi, amathuluzi, njll. Izingwegwe zethu ze-hook...
Izinga Lekhono Lokuphakama Eliphezulu Eline-Bokle
Ama-Hook Loop Straps wethu aqukethe i-nylon esezingeni eliphezulu kanye nenkinobho yepulasitiki. Le Hook And Loop Watch Strap ifaka ukulungiswa nokukhululwa okusheshayo, ukulungiswa okungenamkhawulo nokusetshenziswa kabusha. Ngaphezu kwalokho, le Hook And Loop Watch Strap iyi-antistatic, ngeke iphazamise ukwenziwa...
Hot Straw Hook Loop Cable Tie Strap
I- Hook And Loop Cable Strap iqukethe isimbozi esigoqayo nesizimele kanye nebhande leplastiki. Le Hook Loop Strap With Buckle kulula ukuyinqwaba, iphephile, futhi nemishini ye-cinch, imithwalo, amabhokisi amathuluzi, imishini, njll .Ungakwazi ukugoqa imichilo entweni bese ukondla ithebhu ngokusebenzisa isitebhisi...
I-Yellow Nylon Hook Loop Strap
Le ntambo ye- Yellow h ook ne-loop iketeki iqukethe i-hook ephuzi kanye ne-loop kanye ne-ballet epulasitiki emnyama. Inobubanzi obungu-0.8 inch ngamasentimitha angama-9.8 ubude (20mm x 250mm). Imichilo ye-Hook loop ingimikhiqizo ewusizo ngokukhethekile ekufundeni izintambo ngemuva kwamadeski emahhovisi nokuthwebula...
Hot Hook And Loop Cable Tie
Ukupakisha: I-20pcs / polybag, 1000pcs / ibhokisi. Futhi kungenza noma yikuphi ukupakisha njengoba ucela
Okuqukethwe kwalawa ma-cable lo we-hook loop kungama-microfiber we-nylon aphambili, aziwa ngamandla namandla. Ungama-intshi angama-7 ubude nama-intshi angama-0.86 ububanzi, kufaka phakathi umgodi wamehlo emsileni ovumela uthayi ukuba unamathiselwe kukhebula noma ulengelwe esitsheni. Amakhebula entambo amaningi...
Ikhebula Elinokuguquguquka Lika-Sticker Tie Black
Ukupakisha: Ama-50pcs ngebuze ngalinye, ama-1000pcs ngebhokisi ngalinye. Futhi kungenza noma yikuphi ukupakisha njengoba ucela
Ngabe ufuna okuthile okungasusa izintambo zakho ezingcolile? Le Hook And Loop Cable Strap ingakusiza ekuxazululeni le nkinga ngokuphelele. I-Reusable Waterproof Cable Tie yenziwe ngezinto eziqinile zenylon. Ubukhulu bungama-intshi angama-7.1 ubude nama-intshi angama-0.8 ububanzi, ngakho-ke kulula ukufaka amakhebuli...
I-Wholesale Hook ne-Loop Tie Wrap
Isitifiketi: ROHS, SGS
Intambo yekhebula ye-Hook ne-loop iyindlela enhle yokusebenzisa izinhlelo eziningi ezingenakubalwa ngokulula kwazo, ukusebenza ngezinto ezinhlobonhlobo nangaphansi. Ingasetshenziswa ekwakhiweni okusha kwesakhiwo, ukufakwa kwenethiwekhi, izinkundla zemidlalo yasekhaya, ehhovisi, noma kunoma iyiphi iphrojekthi...
I-Wholesaleless Colour Tie for Power Wire
Imichilo yethu ye-tun loop yonke yenziwe ngezinto eziyikhulu ze-nylon. Le ntambo yethelebula elenzelwa ukuklanywa ngokukhethekile ukugoqa izintambo kanye nezintambo zobukhulu obuhlukahlukene. Kungenza ezinye izindawo ezinezintambo eziningi ezingcolile zihleleke kakhudlwana, kufaka phakathi amadeski, ikhompyutha,...
I-Advisus Cives Ties Orange Cable Ties
I-Advisus Cives Ties Orange Cable Ties Izinto ezisezingeni eliphakeme: Izimbobo zethu zomgexo we-hook zonke zenziwe kusuka ku-100% i-nylon enamathiselwe i-hook & loop, i-D ring hook loop strap iyasebenza futhi iqinile Ukusetshenziswa Okubanzi: Ibhande le-hook loop elinebhande lilungile ekhaya, ehhovisi, egalaji,...
Amakhebula wekhebula leCash
Kwesinye isikhathi izinto ezinhle kakhulu empilweni zilula. Isibonelo, ukuze ulawule izintambo ezingcolile udinga nje la ma-Hook And Loop Cable Strap esikhundleni sohlelo olukhulu kakhulu. Noma lezi zimbobo zokulinganisa izingwegwe zilula ngesakhiwo futhi ziqukethe kuphela i-inki ye-inayiloni ne-loop, zinokuqina...
Amandla Wokunikezela: 600000 Pieces per Month
ISIQINISO ESIQINISEKILEYO - I-Hous Reus And Loop yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ze-nylon. Izinto ezibonakalayo ziqinile futhi zihlala isikhathi eside ukuqinisekisa ukuthi ikhebula lihlala lisendaweni futhi alilahleki. IMISEBENZI EQHAWULEKILE YOKWAKHALA - Le mikhawulo yehipping loops iyindlela enhle...
I-Self Locking Hook Loop Cable Tie Green
Ngabe usakhathazekile ngentambo egcwele ehhovisi? Le Green Self Locking Hook Loop Cable Tie inikezela ngesisombululo esisheshayo nesilula sokuhlanganisa izintambo ndawonye nokuqinisekisa izintambo zakho ukuze zisebenze kangcono. Izintambo ezihanjiswa kahle zisiza ukuvikela imishini yakho, zinciphise ukungezwani...
Lapho esinye isandla sakho sibambe amabhuzu akho, isikhwama noma isigxobo, akuyona into enhle ukuzama ukuhlanganisa isikhumba. Kufanele ume, uxhume kabusha isikhumba bese uqala futhi. Le ntambo ye-asy ithwala i-ski strap ingakunika ikhambi elilungile kunazo zonke. Udinga nje ukubeka i-skis yakho kuleli bhande futhi...
Bike Uhlaka Chain hlala Umvikeli Omkhulu Ikhwalithi enhle - Isivikelo sethu sebhayisekili senziwe ngendwangu engasindi futhi ihlala isikhathi eside ngendwangu ye-hook loop, iqinile kakhulu futhi imelana kakhulu nesimo sezulu kanye nokwamukelwa. Kuvikela upende nezinto ezibonakalayo zohlaka lwebhayisekili lakho...
Ukuzivocavoca Bike Pedals Isiteshi Sokuhamba Ngebhayisikile
I-Model No.: HXW-PS01
Le Bikingcle Pedals Foot Straps yenziwa nge-webping, i-hoop loop kanye nesikhumba. Ubukhulu bebhande bungashintshwa ukuze lilingane nosayizi wezinyawo zabantu abaningi. Ama-Bikingcle Pedal Straps asebenzisa i-adhesive hook loop esikhundleni se-bark ukugwema ukugqoka phakathi kwama-bell. Kukhanya kepha kuqinile futhi...
Waist Band Waist band waist band wait band I-Sweat Waist Band I-Wrist Band Gym I-Exercise Waist Band I-Elastic Wrist Band